Polycarbonate (PC) na-etolite n'ime mpempe akwụkwọ site na usoro extrusion. N'ime usoro extrusion, a na-eme ka polycarbonate na-aga n'ihu yana ịghasa site na mpaghara nke okpomọkụ na nrụgide dị elu ebe ọ gbazee ma gbakọọ ya, ma mesịa mee ka ọ gbanwee site na ụdị anwụ. PC nwere ike ịgbanye n'ime ọkpụrụkpụ dị iche iche: 0.25mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm na 2.0mm. A na-ejikarị ọkpụrụkpụ bụ 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm na 1.0mm.
PC nwere ike agwakọta ya na agba ndi ozo iji gosiputa ya, oriọna ya, nke anya ya na uzo ya.
Rewghasa extruder nwere ike etinyere dị iche iche udidi mepụta udidi PC mpempe akwụkwọ.
Coextrusion PC / PMMA. Ihe nkiri ma ọ bụ mpempe akwụkwọ nwere mpempe akwụkwọ abụọ ma ọ bụ karịa dị iche iche nwere ike ịmepụta site na ịgwakọta iyi ndị a wụrụ awụ. Enwere ike iji usoro a iji jikọta ihe iji nye ihe njikọta nke enweghị ike inweta na otu polymer.
Agụụ akpụ PC nwere ike inye mmetụta nchedo ka okpokoro isi chebe ụbụrụ.
Agụụ-akpụ PC nwere ike ịbụ eji oyi akwa ike MIPS ọrụ iji jikwaa rotational mmetụta ike.
Thermoforming bụ usoro ama ama maka imepụta okpu agha, nke na-etinye mpempe akwụkwọ polycarbonate na-acha silkscreen n'ime oven maka preheat, na-etinye polycarbonate n'ime igwe agụụ, mpempe akwụkwọ a na-ewe iwe na-agbanwe agbanwe, na-eme ka otu ụdị dị na ebu, ụdị ngwaahịa dị iche iche. na ịdị elu ga-eme ka mgbatị dị iche iche n'oge agụụ na-akpụ, agụụ na-adị njọ nke mepụtara PC nwere ike ịnweta ihe ndozi nke agba ma ọ bụ ike ike nke okpu agha, yabụ ọ dị oke mkpa iji nyochaa ma họrọ ọkpụrụkpụ mpempe akwụkwọ polycarbonate nke metụtara ogo okpu agha na ule na-emetụta. ma edozi ya iji mepụta ngwaahịa eji eme ihe.
Tupu agụụ akpụ usoro, anyị na-etinye a oyi akwa nke na-echebe film na polycarbonate mpempe akwụkwọ mgbe extrusion, ihe nkiri na-echebe Polycarbonate si ọkọ n'oge EPS na-ịkpụzi, na-ewepụ chebe film mgbe ikpeazụ okpu agha nzukọ na njedebe.
Mejupụtara PC PMMA
Uzo na-acha PC
Ihe ntanetị PC